युगसम्बाद साप्ताहिक - सरकारको गति र नेपालीको नियति
Monday, 02.17.2020, 12:01pm (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 08.04.2015, 05:00pm (GMT+5.5)
नेपालमा सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुको निकम्पापन र नालायिकको ज्वलन्त नमूना विकास आयोजनाहरुको ढिलासुस्तीबाटै छताछुल्ल हुन्छ । हरेक महिना सरकारले काठमाडौंका सडकहरु छिटो बनाइसक भनेर निर्देशन दिन्छ, तर काम केही हुँदैन । काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने हिम्मत नै सरकारसंग छन । सरकार कोबाट संचालित छ ? बुझिनसक्नुको विषय छ । यस्तै नालायिकले गर्दा सरकारले एउटा विषयमा अघि बढ्यो भने त्यसअघिका काम वा विषयलाई पाखा लगाउने गरेको छ । अहिले यस्तै भएको छ पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनको विषय छ । वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि “पुनःनिर्माण प्राधिकरण” गठन गर्ने चर्चा र प्रसंग नै अहिले हराउन थालेको छ । असार १० गते पुनःनिर्माणका लागि सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्नु केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्राधिकरण गठन गरिएको घोषणा भयो तर अहिलेसम्म त्यसको जग हालिएको छैन । सम्मेलन सकिएर ४४० अर्ब रुपैयाँको अनुदान तथा ऋण उपलब्ध हुने प्रतिबद्धता आएपछि तत्काल प्राधिकरण गठन गरेर काम सुरु गर्नुपर्नेमा अहिले नेताहरु केमा अल्झेका छन् केमा ?
कामगर्ने ढंग र उत्साह नभएकै कारण विदेशीले दिने सहयोग समेत समयमै आउँछ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । भन्न त साउन महिनामा केको पुनःनिर्माण भन्लान् तर बजेट सिध्याउन असार मसान्तसम्म बर्खे झारीमा काम गर्न सकिन्छ भने पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गरेर योजना र खाका बनाउन किन नसकिएको ? सरकार राजनीतिक दलका नेताहरुले यत्रो विनाशको पुनःनिर्माण गर्ने विषयलाई चटक्कै बिर्सेका छन् । प्राधिकरण गठन गर्ने भनिएको एक महिना नाघिसकेको छ । यसबीचमा बजेट आयो, बजेटको विषय समेत छायाँमा परेको छ । सबैलाई संविधानको हतारो छ ।
६ लाखभन्दा बढी जनताका घर भत्किएका छन् । दशौंलाख विस्थापित भएका छन् । विकासका पूर्वाधारहरुको क्षति सोही मात्रामा छ । सरकारी कार्यालयहरु पनि भत्किएका छन् । यस्तोमा पुनःनिर्माणको काम तत्काल अघि बढाउनुपर्नेमा सरकार किन ढिलासुस्ती गरिरहेको हो बुझिनसक्नुको विषय छ । आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ को बजेटले पुनःनिर्माणका लाग पौने खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम हात्तीको मुखमा जीरा मात्र हो । तर, विदेशीले दिने अनुदान तथा सहयोग पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत खर्च गरिने भन्दै उनीहरुका सामु प्रतिबद्धता जनाइएको छ । तर, कामको सुरसार नै छैन । प्राधिकरण नै गठन भएको छैन ।
जनता गाँस–बासका लागि तडपिइरेका छन् । निरन्तरको पराकम्पनले तर्साउन अझै छोडेको छैन । यस्तोमा उठिबास लागेकाहरुलाई राहत दिने गरी कुनै काम अघि बढेको छैन । घरबार विहीन भएकाहरु कहिले सरकारी सहयोग आउला र घर बनाउला भनेर बसिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर रोजगारीको अभावमा पीडितहरु आपराधिक गतिविधिमा लाग्ने खतरा बढ्न थालेको छ ।
भूकम्पका कारण पहिरोको जोखिममा परेका बस्तीहरु हटाउने कार्ययोजना बन्यो, तर कहाँ कति बस्ती सारिए ? ती बस्तीहरु अस्थायी रुपमा सारिने कि स्थायी रुपमा ? यसको कुनै खाका बाहिर आएको छैन । कुन ठाउँमा कस्तो कसिमको संरचना निर्माण गर्ने, गाउँका गाउँ भूकम्पले ध्वस्त भएको छ । ती गाउँहरुको बस्ती विकास कसरी गर्ने ? कुनै योजना छैन । पुनःनिर्माण भनेको भत्केका घर, विद्यालय, पुलको निर्माण मात्र हैन, अब त्यस्तो विपत्ति आएमा कसरी क्षति कम गराउने वा नगराउने भन्ने हो । ध्वस्त भएका बस्तीहरुको र नयाँ बस्ती बस्ने ठाउँहरुको भौगर्भिक परीक्षण, भौतिक पूर्वाधारको सम्भावना, कृषि, सिंचाई, खानेपानीको पहुँच लगायतका विषयहरु पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । जाँदै घर बनाइदिंदैमा पुनःनिर्माण पक्कै हुँदैन ।
अहिले सरकारी गतिविधि हेर्दा लाख्छ उनीहरुले खाली विदेशीलाई देखाउन र उनीहरुसंग पैसा झार्न मात्र कागजमा यो र त्यो काम गरेको देखाउने गरेका रहेछन् । यो मात्र हैन, अन्य विषयमा पनि सरकारी रबैया यस्तै हुने गरेका छ । त्यसैले त योजनबद्ध विकासको ढाँचा अपनाएको ६ दशक पुग्न लागिसक्दा पनि नेपालको प्राथमिकता अझैसम्म ५० वर्ष अघिकै छ । हरेक जिल्ला सदरमुकाममा सडक पुर्याउने, हरेक गाउँमा स्वास्थ्यचौकी स्थापना गर्ने, हरेक गाउँमा टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउने, स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने जस्ता नारा अझै प्राथमिकतामा छन् ।
यी सब काम उतिबेलै सम्पन्न भैसक्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा विकासको नाममा जति राजनीति हुन्छ र जति भ्रष्टाचार हुन्छ त्यो अन्यत्र कहीं पनि हुँदैन । त्यो भ्रष्टाचारमा राजनीतिक तहकै संलग्नता बढी हुन्छ । यो फगत आरोप मात्र हैन । हरेक वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गर्ने सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचार सबैभन्दा उच्च रहेको देखाइरहेको छ । यसैबाट प्रमाणित हुन्छ । नेपालमा विकासको नाममा के भैरहेको छ भनेर ।
नेपालको विकास ढाँचा योजनाबद्ध हैन, नेताको संकीर्णता र राजनीतिक स्वार्थको आधारमा हुने गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विकास योजनाहरुको बीचमा नेताका खल्तीबाट आयोजना पर्ने गरेका छन् । पुनःनिर्माणको काम पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । जनताको आवश्यकताभन्दा दाता र नेताको प्राथमिकताको विषय प्रमुख नहोला पनि भन्न सकिन्न । यस्तोमा निष्पक्ष र विज्ञहरुलाई पदाधिकारी बनाएर पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनमा सरकारले चासो नलिएको विषय अनेक शंकाको घेरामा छ ।
सरकार र राजनीतिक दलहरु भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण मात्र हैन नियमित विकासमा प्रतिबद्ध छन् भने विज्ञहरुको समूह बनाएर पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने र स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारी थाल्नुपर्छ । हैन, राजनीतिक भागवण्डामै प्राधिकरण गठन गर्ने हो भने त्यो केवल कार्यकर्ता पाल्ने थलो मात्र हुनेछ । यदि विज्ञहरुको प्राधिकरण र स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि हुने हो भने पुनःनिर्माणको काम सहज रुपमा हुनेछ । तर सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरु अहिले संविधानमा लागेका छन्, उनीहरुलाई राज्य संचालनका अन्य विषयमा चासो नै छैन । एउटा काम गरेपछि अर्को काम गर्नैनसक्ने महाकमजोरी उच्चतम नमूना अहिले प्रदर्शित छ ।